Joshua Grubbs သည်သူ၏ "ရိပ်မိစွဲမက်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု" သုတေသနပြုချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများအပေါ်တွင်သိုးမွှေးကိုဆွဲတင်နေသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ယောရှုသည် Grubbs သူ၏ "ရိပ်မိ porn စွဲ" သုတေသနနှင့်အတူငါတို့မျက်မှောက်ကျော်သိုးမွှေးဆွဲသလဲ?
UPDATE 2017: တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ် (ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017) Joshua Grubbs မှတီထွင်ထားသည့်“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” မေးခွန်းလွှာဖြစ်သော CPUI-9 ကိုစမ်းသပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်“ အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုတိကျစွာအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် or "ရူပါရုံစွဲ" (ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring) ။ ထို့အပြင် CPUI-1 မေးခွန်း၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း”၊ “ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ” နှင့်“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှု” တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောခိုင်လုံသောရလဒ်များကိုပြန်ပို့ရန်ချန်လှပ်ထားသင့်သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် CPUI-3 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်သို့မဟုတ်လေ့လာခဲ့သောလေ့လာမှုများအပေါ်မှီခိုခဲ့သည့်မည်သည့်လေ့လာမှုမှမဆိုကောက်ချက်အပေါ်သိသိသာသာသံသယများဖြစ်စေသည်။ လေ့လာမှုအသစ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ဝေဖန်မှုများသည်အောက်ပါဝေဖန်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသောအရာများကိုထင်ဟပ်ပြသည်။
တုန်ခါ update: ခုနှစ်တွင် 2019စာရေးသူ Samuel Perry နှင့် Joshua Grubbs တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏အစီအစဉ်အားဘက်လိုက်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် တရားဝင် ပူးပေါင်းမဟာမိတ်များ နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၌တည်၏ YourBrainOnPorn.com။ Perry, Grubbs နှင့် www.realyourbrainonporn.com မှအခြားညစ်ညမ်းသော“ ပညာရှင်” များသည်ပါ ၀ င်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်။ စာဖတ်သူကိုသိသင့်ပါတယ် RealYBOP twitter (၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏သိသာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ) လည်းအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းတွင်ပါဝင်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည် နှင့် NCOSE, Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား“ RealYBOP” ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်လည်းရှိသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္areာရီများဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမွမ်းကြလော့ RealYBOP twitter ကိုဖွင့်သည်) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေနှင့် RealYBOP twitter ကိုသုံးသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်၎င်းတို့၏ RealYBOP အသင်း ၀ င်မှုကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတွင်“ အကျိုးစီးပွားပmembershipိပက္ခ” အဖြစ်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
မကြာသေးမီကစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်“ အစွဲခံရသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” တွင်အယူအဆသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းကို Joshua Grubbs မှမွေးထုတ်ခဲ့ပြီး YBOP ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့သည်။ "၏ဝေဖန်မှုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုသိမြင်စွဲလမ်းမှု - တစ်ချိန်တည်းနှင့်အချိန်နှင့်အမျှဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ခြင်း” (2015)။ ဤတွင်ကြောင်းလေ့လာမှုကနေ birthed အဆိုပါခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အနည်းငယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောရှုဂရော့ဘ်စ်၏“ အလုပ်များသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” စာတမ်းများကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေနေစဉ်သူ၏အလုပ်ကိုပြန်လည်လေ့လာခဲ့သည်။ ဒီမှာ 2015 သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပြproblemsနာမရှိကြောင်းဂရော့စ်ကအကြံပြုသည်
“ စွဲလမ်းနေတဲ့စွဲလမ်းမှုကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူကိုအပျက်သဘောဆောင်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို 'ငါဒါကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်' သို့မဟုတ် 'ငါစွဲလမ်းတယ်၊ ငါဒါကိုမထိန်းချုပ်နိူင်ဘူး၊
Grubbs ဒီ၌သူ၏အမြင်များကဉျြးရုံးဖျော ထူးခြားသော 2016 စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဆောင်းပါး, ထိုညစ်ညမ်းစွဲဟုဆိုကာဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းထက်ပိုပြီးအချည်းနှီးဖြစ်၏။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး က“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူ” ဟုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းခံရသူ၊ porn ၏ပမာဏနှင့်အတူလူတအမြင်ဘာမှရှိပါတယ်s ကိုယောရှုသည် Grubbs, Bowling Green တက္ကသိုလ်ကစိတ်ပညာ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခကပြောပါတယ်။ အဲဒီအစား, ဒါကြောင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့အရာအားလုံးရှိပါတယ် ယာနျဘာသာတရားကို နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား လိင်အပေါ်သဘောထား။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်သူက“ ဒါဟာရှက်စရာပဲ” ဟုပြောသည်။
... .Grubbs က၎င်းကို "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု" ဟုခေါ်သည်။ “ဒါဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်အခြားစှဲထံမှလည်ပတ်သော။ "
ကျွန်တော်တို့ကိုပြသပါလိမ့်မယ်အဖြစ် Josuha Grubbs တိကျစွာ, ဝါဒဖြန့်အပေါ်အထက်တောင်းဆိုမှုများနယ်စပ်ကိုးကားခဲ့သည်ဆိုပါက:
Grubbs ရဲ့မေးခွန်းလွှာကအကဲဖြတ် သာ အမှန်တကယ် porn စွဲလမ်းမှုမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်“ အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း” မရှိပါ။ အမှန်မှာ၊ Grubbs သည်သူ၏မေးခွန်းလွှာကို (စံ) မူးယစ်ဆေးစွဲမေးခွန်းပုံစံများအပေါ်အခြေခံသည်။
အထက်ကသူ့ကြေညာချက်ဆန့်ကျင်သုံး porn ၏ပမာဏဖြစ်ပါသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန် Grubbs ၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာ (CPUI) နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တကယ်တော့ Grubbs ၏လေ့လာမှုများအရညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (CPUI အပိုင်း ၂ နှင့် ၃) သည်အလွန်ဝေးကွာသည်ကိုတွေ့ရသည် နောက်ထပ် ကယာနျဘာသာတရားကိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထက်ကြည့်ရှုအားပေး porn ၏ပမာဏနှင့်ပတ်သက်သော။
ထို့အပြင်“ နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုသော” စွဲလမ်းမှုသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအတိုင်းအတာမဟုတ်ပါ။ ယခင်လေ့လာမှုများအရ“ နာရီပေါင်းများစွာကြည့်ရှုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်း” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုရလာဒ်များနှင့်လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အသုံးပြုမှုများစွာသောများစွာသောအပိုဆောင်း variable တွေကို လည်း တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြု။
Grubbs ၏ဤထင်ရှားသောစိန်ခေါ်မှုများအပြင် "porn စွဲဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသာကျနော်တို့စဉ်းစားသောအခါ "သူ၏ပြောဆိုချက်ကို, သူ့မော်ဒယ်ပြိုလဲ:
ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်တွေ့ရသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သျောလညျးအခြို့သော 39 ရှိပါတယ် အာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲထဲမှာစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံ။
လေ့လာမှုများ၏သဘောအရဆိုလျှင် (ဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အနိမ့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏နှုန်းထားများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4, လေ့လာမှု 5, လေ့လာမှု 6, လေ့လာမှု 7, လေ့လာမှု 8, လေ့လာမှု 9, လေ့လာမှု 10, လေ့လာမှု 11, လေ့လာမှု 12, လေ့လာမှု 13, လေ့လာမှု 14, လေ့လာမှု 15, လေ့လာမှု 16, လေ့လာမှု 17, လေ့လာမှု 18, လေ့လာမှု 19, လေ့လာမှု 20, လေ့လာမှု 21, လေ့လာမှု 22, လေ့လာမှု 23, လေ့လာမှု 24, လေ့လာမှု 25).
ဆိုလိုသည်မှာ Grubbs ၏ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုနမူနာပြခြင်းသည်မလွဲ(ကန်ဖြစ်သည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ ဆိုလိုသည်မှာ "ဘာသာတရား" ကိုဆိုလိုသည် မဟုတ် porn စွဲကြိုတင်ခန့်မှန်း။
ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်နာတာရှည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ libido အနိမ့်နှင့် anorgasmia တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း သို့တိုင် မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ link ကိုညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှအသုံးပြုခြင်းနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် ED နှုန်းထားများနားမလည်နိုင်လောက်အောင် 1000% အားဖြင့်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်ပါပြီ "ပြွန်" ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ညစ်ညမ်းသူများ၏ဘ ၀ တွင်ရောက်ရှိလာပြီးကတည်းကအသက် ၄၀ မပြည့်သေးသောအမျိုးသားများဖြစ်သည်
ဤ ကုသမှု-ရှာကြံ porn စွဲအပေါ် 2016 လေ့လာမှု ကြောင်းစျယာနျဘာသာတရားကိုတွေ့ရှိခဲ့ မပတျသကျဘူး လိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောလက္ခဏာများသို့မဟုတ်ရမှတ်များနှင့်အတူ။
ဤ ကုသမှု-ရှာကြံ hypersexuals အပေါ် 2016 လေ့လာမှု တွေ့ရှိရ အဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေး ဘာသာရေးကတိကဝတ်များနှင့် hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးဆက်များ၏ Self-အစီရင်ခံအဆင့်ဆင့်အကြား။
အောက်ဖော်ပြပါကဏ္များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Grubbs ၏အဓိကတောင်းဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းမည်၊ သူ၏အချက်အလက်များနှင့်နည်းစနစ်များကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာပြီးဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်ဟုသူ၏ပြောဆိုချက်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်များကိုတင်ပြပါမည်။ သို့သော် Grubbs သည်သူ၏စာတမ်းများကိုတည်ဆောက်သည့်တိုင် ၃ ခုမှ ဦး စွာစတင်ကြပါစို့။
Grubbs ၏တရား ၀ င်သည်ဟုဆိုရန်အတွက်ဤသုံးမျိုးလုံးသည်မှန်ကန်ပြီးအမှန်တကယ်သုတေသနမှအထောက်အကူပြုရမည်။
1) က Grubbs ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory (CPUI) သည်“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ထက်အကဲဖြတ်ရမည် အမှန်တကယ် porn စွဲ။
ကမ။ အဆိုပါ CPUI Assessment အမှန်တကယ် porn စွဲ, Grubbs ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိအတွက် CPUI အတည်ပြုရန်သူ့ရဲ့မူလ 2010 စက္ကူ (အောက်တွင်ပိုပြီး) တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, CPUI သာဖြစ်ခဲ့သည် အတည်ပြု တစ်ဦးအဖြစ် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းနှင့်မည်သည့်အခါမျှ“ စွဲထင်မြင်မှုစွဲမှတ်ခြင်း” စမ်းသပ်မှုအနေနှင့်မဟုတ်ပါ။ အထောက်အကူပြုသည့်သိပ္ပံနည်းကျမျှတမှုမရှိသောကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Grubbs သည်သူ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုစမ်းသပ်သည့်“ ရူပါရုံစွဲစွဲလမ်းမှု” စမ်းသပ်မှုကိုရေတွက်။ မရ။
မှတ်ချက်။ ။ Grubbs ၏လေ့လာမှုများတွင်သူသည် CPUI စစ်ဆေးမှု (အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု) တွင်စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုရည်ညွှန်းရန်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုသူအသုံးပြုသည်။ “ သိမြင်စွဲလမ်းမှု” ကိုမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောကြောင့်“ ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုစာရင်း” သည်တိကျပြီးလှည့်ဖျားကင်းသောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းကြောင့်ဘာသာပြန်ကျမ်း၌ပျောက်ဆုံးသွားသည်။
2) Grubbs အသုံးပြုမှုနာရီနှင့် CPUI ရမှတ်များအကြားမျှဆက်စပ်မှု (porn စွဲ) ကိုနည်းနည်းတွေ့ပြီရမည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်သူမျှမနောက်တဖန်။ ဥပမာ, Grubbs et al။ 2015 အသုံးပြုမှုနာရီနှင့် CPUI ရမှတ်များအကြားတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဆက်စပ်ဖော်ပြသည်။ p မှစ. ။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏ 6:
ထို့အပြင်ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုနာရီများအတွင်းအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသတို့သာမကသိသိသာသာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ရိပ်မိစွဲ [စုစုပေါင်း CPUI ရမှတ်] ။"
Grubbs ရဲ့ ဒုတိယ 2015 လေ့လာမှု တစ်ဦးကဖော်ပြခဲ့သည် အားကောင်း CPUI ရမှတ်များနှင့်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများအကြား CPUI ရမှတ်များနှင့်“ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီများ” အကြားဆက်စပ်မှုရှိသည်။
Grubbs မည်သို့အတွက်တောင်းဆိုနိုင် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ကြောင်းစွဲစွဲလမ်း "ညစ်ညမ်းတဲ့လူကိုအမြင်များ၏ပမာဏနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်,မိမိအလေ့လာမှုများအသုံးပြုမှုအရေအတွက်ထုတ်ဖေါ်သည့်အခါ "" သိသိသာသာနှင့်အပြုသဘော "CPUI ရမှတ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်း?
3) အခြားလေ့လာမှုများအသုံးပြုသောပမာဏ porn linearly porn လက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြရမည်ဖြစ်သည် porn စွဲစမ်းသပ်မှုအပေါ်စွဲလမ်းသို့မဟုတ်ရမှတ်များ။
သူတို့မလုပ်ခဲ့ကြဘူး။ အခြားသုတေသနအဖွဲ့များကမူ“ နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်း” သည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု (သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း) နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာစွဲခြင်းကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို“ နာရီအသုံးပြုမှု” ထက်အခြား variable များကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် Grubbs ၏ပြောဆိုချက်များသည်သူ၏နည်းစနစ်သည်မှန်ကန်ပြီးသူ၏ပြောဆိုချက်များမှာတိကျမှန်ကန်မှုရှိလျှင်ပင်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည်။ (ပြtheနာမဟုတ်ပါ)“ အသုံးပြုသောနာရီများ” သည်“ စွဲလမ်းမှု” အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော proxy တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းသည် Grubbs ယူဆထားသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြီးမားနိုင်သည်။
Grubbs-generate လုပ်သောခေါင်းစဉ်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများသည်အထက်ဖော်ပြပါအချက် (၃) ခုစလုံးမှန်ကန်ကြောင်းပေါ်မူတည်သည်။ သူတို့မဟုတ်။ ဤမှတ်တိုင် ၃ ခုနှင့် Grubbs ၏လေ့လာမှုများနှင့်တောင်းဆိုချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုယခုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
အပိုင်း ၁–“ ရိပ်မိသော” ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏ဒဏ္:ာရီ
အဆိုပါဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory (CPUI): ဒါဟာတကယ့်စွဲစမ်းသပ်မှုပါပဲ။
Grubbs သည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါတိုင်းသူသည် CPUI ၏စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုဆိုလိုသည်။
CPUI ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းသည်ကဏ္ each တစ်ခုချင်းစီ၏ရမှတ်များသည်“ အသုံးပြုချိန်” နှင့်“ ဘာသာတရားများ” ကဲ့သို့သောအခြားပြောင်းလဲမှုများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုဆန်းစစ်သည့်အခါနောက်ပိုင်းတွင်အလွန်အရေးကြီးလာသည်။
3. ငါအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်မလိုချင်ကြဘူးတောင်မှအခါ, ငါကမှသူ့နောက်သို့ခံစားရတယ်
အမှန်တကယ်တွင် Grubbs ၏ Cyber ​​Pornography Use Inventory (CPUI) မေးခွန်းလွှာသည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်စွဲမေးခွန်းလွှာများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အခြားစွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုများနည်းတူ CPUI သည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောအပြုအမူများနှင့်လက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်သည်။ အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊ သုံးစွဲရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှု၊ သုံးစွဲရန်တွန်းအား၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများ၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်နှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေး။ စင်စစ်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော CPUI မေးခွန်း ၉ ခုအနက် ၁ ခုသာလျှင်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ကိုအရိပ်အမြွက်ပြသည်။
ဒါပေမယ့်လူတစ်ယောက်ကိုပြောတာပဲ စုစုပေါင်း မေးခွန်း (၉) ခုလုံး၏ရမှတ်သည်စွဲလမ်းမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုမဟုတ်ဘဲ“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ အလွန်လှည့်ဖြားအလွန်လိမ္မာပါးနပ်နှင့်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမရှိဘဲ။ Agnotology အစာကျွေး, မည်သူမဆို? (Agnotology ယဉ်ကျေးမှုအသွေးဆောင်အဝိဇ္ဇာသို့မဟုတ်သံသယ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအထူးသဖြင့်လယ်ပြင်၌သုတေသန၏ပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူရှုပ်ထွေးဖို့ဒီဇိုင်းတိသို့မဟုတ်အထင်အမြင်မှားစေသိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များ၏အထူးသဖြင့်ထုတ်ဝေဖြစ်ပါတယ်။ Big ဆေးရွက်ကြီး agnotology ၏လယ်ပြင်တီထွင်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ )
ဓာတုနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအထူထောင်စွဲအကဲဖြတ်စမ်းသပ်မှုဆယ်စုနှစ်များစွာအကဲဖြတ်ရန်ဖို့ CPUI အဖြစ်အလားတူမေးခွန်းများကိုအပေါ်အားကိုးသတိပြုပါ အမှန်တကယ်, မရရုံ ရိပ်မိ, စွဲ။ CPUI မေးခွန်းများကို 1-6 အဆိုပါ4CS ဖွငျ့ဖျောပွထားသညျ့အဖြစ် core ကိုစွဲအပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်း ၇-၉ သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုစစ်ဆေးသည်။ CPUI ကို“ များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသောစွဲလမ်းမှုအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်း” နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပါစို့။4 CS ။Cs လေးခုနှင့်ဆက်နွှယ်သော CPUI မေးခွန်းများကိုလည်းမှတ်သားထားသည်။
နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းရန် Control (ကိုသုံးပါ2, 3, ဖြစ်နိုင်စရာ 4-6)
Cသုံးစွဲဖို့စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ် (3 အထူးသဖြင့်, ဒါပေမယ့် 1-6 ) မတရားသောအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်
Cအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (ရှိနေသော်လည်းအသုံးပြုမှု ontinued4-6, ဖြစ်ကောင်း 7-9)
စွဲကျွမ်းကျင်သူများကအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အခြေခံ-သုတေသနလေ့လာမှုများဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းနောက်ခံစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူရောဂါလက္ခဏာတွေအဲဒီမေးခွန်းတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင့်စွဲညွှန်းအတိုင်း 4Cs တူသောအကဲဖြတ် tools များအပေါ်မှီခိုနေရသည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ စွဲလမ်းဆေးပညာ၏အမေရိကန် Society ၏အများပြည်သူမူဝါဒကကြေညာချက်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် Grubb ၏ CPUI သည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းစေသောစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ ယင်းကို“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” အတွက်အတည်မပြုနိုင်ပါ။
ကနဦး 2010 Grubbs လေ့လာမှု CPUI အကဲဖြတ်ဆိုပါတယ် အမှန်တကယ် porn စွဲ
In Grubbs ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ်စာတမ်း သူကအကဲဖြတ်တစ်ဦးမေးခွန်းလွှာအဖြစ်ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory (CPUI) အတည်ပြု အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းဆေး “ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” နှင့်“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုသူ၏ ၂၀၁၀ စာတမ်းတွင်မဖော်ပြထားပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် Grubbs et al ။ , 2010 သည် CPUI သည်စစ်မှန်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ကြောင်းနေရာများစွာတွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည် -
အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများကိုနားလည်ရန်အဆိုပြုထားသောယခင်ဖော်ပြထားသောမော်ဒယ်များသည်ဤလေ့လာချက်အတွက် Delmonico (Delmonico & Griffin, 2008) မှတီထွင်ခဲ့သော Internet Sex Screening Test ပြီးနောက်ပုံစံပြုသည့် Cyber-Pornography Use Inventory (CPUI) ကိုအခြေခံသည့်သီအိုရီယူဆချက်များဖြစ်သည်။ ။ အဆိုပါ CPUI ဒီဇိုင်းကိုစွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုဟာအပြုအမူကိုရပ်တန့်နိုင်ခြင်း, ထိုအပြုအမူ၏ရလဒ်အဖြစ်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများ, နှင့်အပြုအမူနဲ့ generalized စွဲဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းနိယာမအပေါ်အခြေခံခဲ့ပါတယ် (Delmonico & Miller က, 2003) ။
အဆိုပါ CPUI အမှန်ပင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲအကဲဖြတ်ထားတဲ့တူရိယာအဖြစ်ဂတိတော်ကိုပြသထားဘူး။ ထိုကဲ့သို့သော ISST အဖြစ်ယခင်တူရိယာ, သွားရမည်အကြောင်း, သာကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအကဲဖြတ်ခဲ့သည် ဒီစကေးအတိအကျကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအကဲဖြတ်အတွက်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသရုပ်ပြပြုလေ၏။ ထို့ပြင်ယခင်ကကရှင်းပြခဲ့သည်ကိုစှဲပုံစံများစကေးပေါ်တွင်ပစ္စည်းများကိုအချို့အဆင့်ကိုတှေ့ရပုံပေါ် ပစ္စည်းမူတည်နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှစ်ဦးစလုံးအတှကျရောဂါရှာဖွေစံတစ်ခု ICD နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသီအိုရီထောက်ခံမှုနှင့်အလားအလာရှိသောဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှု။
တိုက်ရိုက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ရိပ်မိသို့ကိုအသာပုတ်ဟန်နောက်ဆုံးတွင်စှဲပုံစံများပေါ်တွင်ပစ္စည်းများငါးမူရင်း compulsive စကေးကနေစကေး သူတို့ပါဝငျထားတဲ့အတွက်အမူအကျင့်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ မည်သည့်အခြေအနေအရတစ်ဦးပြဿနာအပြုအမူကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း SD နှင့် PG နှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးပါသောအဖြေရှာတဲ့စံနှုန်းမသာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ SD ဖြင့်ထင်ရှားကြောင့်လည်း, နှစ်ဦးစလုံးစွဲ၏အဓိကဒြပ်စင်တစ်ဦးအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်နိုင်ပြီး, ICDs (Dixon က et အယ်လ်, 2007; ။ Potenza, 2006) ။ ၎င်းသည်ရောဂါဖန်တီးသောဤနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင်းပုံရသည်။
တစ်ဦးအတွက် 2013 လေ့လာချက် Grubbs လက်ရှိ 32 မှ 39 (သို့မဟုတ် 41 သို့မဟုတ် 9) မှ CPUI မေးခွန်းတွေအရေအတွက်ကိုလျှော့ချ, နှင့် Re-တံဆိပ်ကပ် သူ၏ အမှန်တကယ်, အတည်ပြု ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုစမ်းသပ်သည့်“ စွဲလမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” စမ်းသပ်မှု (ဒီမှာက အဆိုပါ CPUI ၏ 41-မေးခွန်းတစ်ခုကိုဗားရှင်း). သူမဆိုရှင်းပြချက်သို့မဟုတ်မျှတမှုမရှိဘဲပြု သူ၏ ၂၀၁၃ စက္ကူတွင်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုအကြိမ် ၈၀ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်စာတမ်းမှကောက်နုတ်ချက်တွင် Grubbs သည် CPUI-80 ၏သဘောသဘာဝကိုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေ့လာကြည့်ရအောင် - CPUI ကိုခွဲခြားတဲ့အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်တော့မှမအတည်ပြုဘူး အမှန်တကယ် porn စွဲ မှ“ရိပ်မိ porn စွဲ။ဆိုလိုသည်မှာလူထုသည် Grubbs ၏စကားလုံးအပေါ်တွင်သာမှီခိုအားထားနေခြင်းကိုဆိုလိုသည်မှာသူ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစမ်းသပ်မှုသည် CPUI မှမူလကအတည်ပြုခဲ့သော“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” နှင့်“ အမှန်တကယ် porn စွဲလမ်းမှု” တို့အကြားခွဲခြားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ခိုင်လုံသောပြောင်းလဲမှုကိုစမ်းသပ်မှု၏အခြေခံပြောင်းလဲမှုကိုမသုံးပဲလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာအဖြစ်အတည်ပြုပြီးသောစမ်းသပ်မှုကိုပြန်လည်မှတ်သားခြင်းကဘယ်လောက်သိပ္ပံနည်းကျလဲ။
ဒါဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ပညာရေးဂျာနယ်အယ်ဒီတာများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သူများသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုသူတို့လက်မခံမီသိသိသာသာပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်မှာမထူးဆန်းပါ။ Joshua Grubbs ကသူ၏ဒုတိယ CPUI-9 လေ့လာမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သူနှင့်သူ၏ ၂၀၁၃ လေ့လာမှု၏တွဲဖက်စာရေးဆရာများသည် CPUI-2013 ၏“ စွဲလမ်းမှု” ဝေါဟာရများကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုအီးမေးလ်တစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ porn စွဲ) ။ ထို့ကြောင့် Grubbs သည်သူ၏စမ်းသပ်မှု၏ဖော်ပြချက်ကို“ ပြောင်းလဲ” ခဲ့သည်။ရိပ်မိ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲ "မေးခွန်းလွှာ။ အနှစ်သာရအားဖြင့်ဤဂျာနယ်တစ်ခုတွင်အမည်မဖော်လိုသူဝေဖန်သုံးသပ်သူ / အယ်ဒီတာတ ဦး က“ မထောက်ခံသည့်၊ရိပ်မိ အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု အဆိုပါ CPUI တစ်ဦးအကဲဖြတ်စမ်းသပ် differential အဖြစ်အတည်ပြုဖူး အမှန်တကယ် porn စွဲ မှ“ရိပ်မိ porn စွဲ။“ ဒီမှာ Grubbs ပါ ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. tweetingသုံးသပ်သူ၏မှတ်ချက်များအပါအ ၀ င်
ယောရှု Grubbs‏ @JoshuaGrubbsPhD
နီကိုးလ် R ကို Prause, ပါရဂူဘွဲ့‏ @NicoleRPrause
ယောရှု Grubbs‏ @JoshuaGrubbsPhD ဇူလိုင်လ 14
“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာထုံးတမ်းစဉ်လာမရှိပါ
Grubbs တသမတ်တည်းကိုးကားနှစ်ခုလေ့လာမှုများ (1, 2သူသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအယူအဆကိုတရားဝင် / တရားဝင်သည်ဟုဆိုလိုရန်ဆေးလိပ်သောက်သူများအပေါ်တွင်ပြုသည်၊ ထို့အပြင်ဂရူဘ်အသုံးပြုသည့်အတိုင်း“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအယူအဆကိုလည်းမထောက်ခံပါ။ ပထမတစ်ခုက Grubbs သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်မတူသကဲ့သို့၊ တကယ်စီးကရက်စွဲတာမရှိဘူး ထိုလေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးက“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” အားအမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ခွဲခြား။ သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သောမေးခွန်းလွှာတစ်ခုကိုတီထွင်သည်ဟုဆိုခြင်းမရှိပါ။ နှစ် ဦး စလုံးလေ့လာမှုများအကဲဖြတ်အပေါ်အစားအာရုံစူးစိုက် ဘယ်လိုအနာဂတ်စွဲ၏အစောပိုင်း Self-အစီရင်ခံစာများနှင့်ဆက်စပ်သောဆေးလိပ်ဖြတ်အောင်မြင်မှု.
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအပါအ ၀ င်အရာဝတ္ထုနှင့်အပြုအမူများအပေါ်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” အတွက်မေးခွန်းလွှာမရှိပါ (ဂရော့ဘ်စ်၏ပြောဆိုချက်များအပေါ် မူတည်၍) ။ ကောင်းသောဂူဂဲလ်ပညာရှင်သည်အောက်ပါ“ စွဲလမ်းမှုများ” အတွက်ရလဒ်သုညကိုပြန်ပေးသည်မှာကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရှိသည်။
သည်အခြားသုတေသီများကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်း CPUI ကိုသုံးပါ အမှန်တကယ် porn စွဲစမ်းသပ်
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု: ကအခြားသုတေသီများတစ်ဦးအဖြစ် CPUI ဖော်ပြရန် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းအကဲဖြတ်ခြင်းမေးခွန်းလွှာ (၎င်းသည်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုသည်) နှင့်၎င်းကို၎င်းတို့ထုတ်ဝေထားသောလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုပါ။
သုတေသန 20 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု (2014): အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏အကဲဖြတ်ဘို့မေးခွန်းနှင့်အကြေး
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (2016) တွေထဲမှာပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုဆန်းစစ်ပါဆက်စပ်မှု
အထက်နောက်ဆုံးလေ့လာမှု Grubbs CPUI တစ်ဦးမဟုတ်တော့ဗားရှင်းနှင့် DSM-5 အင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစွဲသတ်မှတ်ချက်ကနေဆင်းသက်လာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းလွှာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အောက်ကဂရပ်များတူညီဘာသာရပ်များကိုပြသ'' နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းအပေါ်ရမှတ်များ:
အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ - Grubbs CPUI နှင့်သုတေသီများ၏ DSM-5 အခြေခံညစ်ညမ်းမှုစွဲမေးခွန်းလွှာအတွက်အလွန်တူညီသောရလဒ်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုတို့သည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ CPUI သည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုကို”“ အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှု” နှင့်ခွဲခြားနိုင်ခဲ့လျှင်ဂရပ်များနှင့်ဖြန့်ဝေမှုများသည်လုံးဝမတူပါ။ သူတို့မဟုတ်။
အကြံပြုချက် - သင် Grubbs စက္ကူတစ်ခုသို့မဟုတ် Grubbs အသံကိုမီဒီယာတွင်ဖတ်သည့်အခါ“ ရိပ်မိ” ဟူသောစကားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီး၎င်းသည်မည်မျှကွဲပြားခြားနားသည်ကိုဖတ်ပါ - ၎င်းသည်အပြာစွဲစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားသုတေသနပြုမှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကိုကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ “ ရိပ်မိ” ဟူသောစကားလုံးပါသောဂရော့ဘ်စ်၏နိဒါန်းမှဝါကျနှစ်ခုကိုဖျက်ပစ်သည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုသည်သာယာဝပြောမှုအဆင့်နိမ့်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မကြာသေးမီကသုတေသနပြုမှုအရညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုသည်စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Grubbs, Stauner, Exline, Pargament, & Lindberg, 2015; Grubbs, Volk et al, 2015) ။
CPUI သည်“ စွဲလမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုအကဲဖြတ်သည်ဟုထောက်ခံမှုမရှိသောပြောဆိုချက်ကိုဖယ်ရှားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လေ့လာမှုရလဒ်နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားပြီးအထင်လွဲစရာခေါင်းစီးများမရှိပါ။ ထပ်မံ၍ ကြည့်ရှုရလျှင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတို့နှင့်ဆက်နွယ်နေသောဆယ်စုနှစ်များစွာရှိသောအမှန်တကယ်၊ အသုံးပြုမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။
အပိုင်း ၂– ဆက်နွယ်မှုများဆိုထားသလား။ “ အသုံးပြုချိန်” နှင့်“ ဘာသာရေး”
Grubbs ၏ပြောဆိုချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ကြည့်ရှုသည့် porn ပမာဏသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲမှုရမှတ်များနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်နေသည်
“ နာရီအသုံးပြုမှု” သည်စွဲလမ်းမှုအတွက်တစ်ခုတည်းသော proxy အဖြစ်ဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အဘယ်သူမျှမ “ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” နှင့်အပြာစွဲစွဲမှုစစ်ဆေးခြင်းရမှတ် (CPUI) အကြားဆက်နွယ်မှု။ ဒါကမဟုတ်ပါဘူး။ Grubb နဲ့စကြရအောင် 2013 လေ့လာချက် CPUI-9 ကို“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” စမ်းသပ်မှု (ပြတ်သားစွာဖြင့်) ပြဌာန်းခဲ့သည်
“ စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များ၊ compulsivity subscale နှင့် access ကြိုးစားမှု subscale အားလုံးသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ရိပ်မိစွဲ [စုစုပေါင်း CPUI ရမှတ်] အသုံးပြုမှုပိုမိုကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ "
“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ စုစုပေါင်း CPUI ရမှတ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဒီ 2015 Grubbs လေ့လာမှု အသုံးပြုမှုနာရီနှင့် CPUI ရမှတ်များအကြားတစ်ဦးတော်တော်လေးခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ p မှစ. ။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏ 6:
"ထို့အပြင် နာရီအတွင်းပျှမ်းမျှနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာများနှင့်အပြုသဘောဆက်စပ်ခဲ့သည် စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အမျက်ဒေါသနှင့်အတူအဖြစ်နှင့်အတူ ရိပ်မိစွဲ [စုစုပေါင်း CPUI ရမှတ်] ။ "
တစ်နည်းပြောရလျှင်သတင်းစာခေါင်းစီးများနှင့်သတင်းစာများမှ Grubbs ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဘာသာရပ်များ၏စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များ သိသိသာသာ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီနှင့်ဆက်စပ်။ သို့သော်“ ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုနာရီများ၌အသုံးပြုခြင်း” သည်ဘာသာတရားနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။ ဘယ် CPUI- စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်ပိုပြီးဆက်စပ်နေသလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၅ Grubbs စက္ကူမှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုမည်။စွဲလမ်းမှုအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှခံစားစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏သီးခြားလေ့လာမှု (၃) ခုပါ ၀ င်ပြီး၊ စားပွဲတင်2အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော2သီးခြားလေ့လာမှုများကနေဒေတာတွေကိုပါရှိသည်။ နှင့် CPUI ရမှတ် (တစ်ခုလုံးကို CPUI-9 နှင့်3CPUI ပုဒ်မခွဲသို့ပြိုပျက်); ဤရွေ့ကား data တွေကိုအနည်းငယ် variable တွေကို (စျယာနျဘာသာတရားကို porn အသုံးပြုမှုနာရီ) အကြားဆက်စပ်မှုကိုဖျောပွ။
table ထဲမှာနံပါတ်များကိုနားလည်ဘို့သိကောင်းစရာများ: သုညနှစ်ခု variable တွေကိုအကြားမျှဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်; 1.00 နှစ်ခု variable တွေကိုအကြားတစ်ဦးပြည့်စုံဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ အရေအတွက်2variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုဟာပိုမိုအားကောင်းအဆိုပါပိုကြီး။ နံပါတ်တစ်ရှိပါက အနှုတ် သင်္ကေတ။ ဆိုလိုတာကအရာနှစ်ခုကအနှုတ်ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ (ဥပမာအားဖြင့်၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်နှလုံးရောဂါအကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်ဘာသာစကားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဝလွန်ခြင်းသည် အပြုသဘောဆက်စပ်မှု နှလုံးရောဂါနှင့်အတူ။ )
အဆိုပါဆက်စပ်မှုအကြားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များ (# 1) နှင့်“ အသုံးပြုချိန်များတွင်” (# ၅) နှင့်“ ဘာသာရေးညွှန်းကိန်း”" (# ၆) Grubbs ၏လေ့လာမှုနှစ်ခုအတွက်
စုစုပေါင်း CPUI ရမှတ်များနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအကြားဆက်စပ်မှု:
လေ့လာမှု 1: 0.25
လေ့လာမှု 2: 0.35
စုစုပေါင်း CPUI ရမှတ်များနှင့်“ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” အကြားဆက်စပ်မှု -
လေ့လာမှု 1: 0.30
လေ့လာမှု 2: 0.32
ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, CPUI-9 ရမှတ်တစ်ဦးရှိ အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်း ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုထက်“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှု” နှင့်ဆက်ဆံရေး! ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်“ နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်း” သည်ညစ်ညမ်းမှုစွဲခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည် ထက် သာ. ကောင်း၏ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသည်။ သို့သော်လေ့လာမှု၏စိတ္တဇကမူဘာသာတရားသည်“ရိပ်မိစွဲဖို့စေ့စ့စပ်စပ်ဆက်နွယ်"(CPUI ရမှတ်များ) ။ အကယ်၍ ဤသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုသည့်နာရီများ” သည် CPUI မှရမှတ်များနှင့်လည်း“ ကြံ့ခိုင်စွာဆက်နွယ်နေ” ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဘာသာရေးဘာသာတရား၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံမှုကိုအလေးထားသည်ကိုသိလိုသည် အသုံးပြုမှုနာရီ doublespeak အားဖြင့်သတိမမူသို့မဟုတ်ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏.
ဤအရာကိုပြောဆိုရန်အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ - Grubbs ၏အချက်အလက်များသည်မီဒီယာနှင့်သူ၏လေ့လာမှုများ၏အနှစ်ချုပ်များတွင်သူ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ သင်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုပြန်လည်လန်းဆန်းစေရန် Grubbs ၏ဤအချက်သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်္ဂါရပ်ဆောင်းပါး:
"porn စှဲလမျးသူ" အမည်တပ်ထားသောခံနေရ တစ်ဖက်အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်ပင်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးပြုပုံ ရှိပါတယ် ဘာမြှ porn ၏ပမာဏနှင့်အတူလူတအမြင်များလုပ်ဖို့ယောရှုသည် Grubbs, Bowling Green တက္ကသိုလ်ကစိတ်ပညာ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခကပြောပါတယ်။ အဲဒီအစား, ဒါဟာရှိပါတယ် အားလုံး အတူလုပ်ဖို့ ဘာသာရေး…
အဖြစ်မှန်မှာတော့ဆန့်ကျင်ဘက်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်: porn စွဲစျယာနျဘာသာတရားကိုဖို့ထက်အသုံးပြုမှုမှနာရီကိုပိုပြီးဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့အပိုင်းကြောင်းထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ် အမှန်တကယ် CPUI မေးခွန်းများ ၁-၆ ဖြင့်တိုင်းတာသော“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သည်အလွန်ဝေးကွာသည် နောက်ထပ် ဘာသာတရားနှင့်သက်ဆိုင်သည်ထက်“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
Grubbs ၏လေ့လာမှုများကဖော်ပြသည် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဘာသာတရားများထက်“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှု” နှင့်များစွာဆက်စပ်နေသည်
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (CPUI-9 စုစုပေါင်းရမှတ်) သည်ဘာသာတရားနှင့်မတူဘဲ“ လက်ရှိအသုံးပြုနေသောနာရီနာရီများ” နှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု Grubbs တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သင်မူကား၊porn စွဲ (CPUI ရမှတ်များ): Grubbs တဦးတည်းပြောဆိုချက်ကိုအကြောင်းကိုတရား is ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်စပ်သော။ " တကယ်မဟုတ်ဘူး။ လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ဒီပြောဆိုချက်ကဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတာကြည့်ရလိမ့်မယ်။
Grubbs ၏နံပါတ်များကိုယခုတိုင်ထိန်းထားခြင်းသည်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုရှိသည် အမှန်တကယ် porn စွဲနှင့်ဘာသာတရား။ သို့သော်၎င်းသည်ယခင်အပိုင်းတွင်ဖော်ပြသည်ထက်ပိုမိုအားနည်းသည် နည်းတူအရေးကြီးတယ်၊ အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနာရီ” သည်ယခင်အပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်ထက်များစွာပိုမိုအားကောင်းသည်။
ပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးသည့်အခါ CPUI-1 ၏မေးခွန်း ၁-၆ သည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်လက္ခဏာများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်သည်။ မေးခွန်းများ ၇-၉ (စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ) သည်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်း၊ ရလဒ်အနေဖြင့်, "အမှန်တကယ် စွဲ” သည်မေးခွန်း ၁-၆ (Compulsivity & Access Efforts) နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်သည်။
ပထမ ဦး စွာ CPUI ကဏ္3ခွဲ ၃ ခုနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။ အောက်ပါဇယားတွင်သုံးခု CPUI ပုဒ်မခွဲ 2,3နှင့်4ရေတွက်ခြင်းနှင့်နေကြတယ် ယာနျဘာသာတရားကိုအညွှန်း အရေအတွက်အား6ဖြစ်ပါတယ်။
ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ခံစား compulsive (မေးခွန်းများကို 1-3) အကြားဆက်စပ်မှု
လေ့လာမှု 2: 0.14
ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် Access ကိုကြိုးပမ်းမှုများ (မေးခွန်းများကို 4-6) အကြားဆက်စပ်မှု
လေ့လာမှု 1: 0.03
လေ့လာမှု 2: 0.11
ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ (မေးခွန်းများကို 7-9) အကြားဆက်စပ်မှု
လေ့လာမှု 1: 0.32
လေ့လာမှု 2: 0.45
သော့ချက်တွေ့ရှိချက်စျယာနျဘာသာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် (.39) သို့ သာ အဆိုပါ CPUI-9 ၏စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပိုင်း: သူတို့ (ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိစိတ်ဓာတ်, ဒါမှမဟုတ်နေမကောင်း) porn ကြည့်ရှုပြီးနောက်ခံစားရပုံကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကမေးတယ်ပေးသောမေးခွန်းများကို 7-9 ။ အများဆုံးတိကျစွာအကဲဖြတ်ရန်ကြောင့်ဘာသာတရားနှစ်ခုခွဲကဏ္ဍများမှဝေးလျော့နည်းဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် (မေးခွန်းများကို 1-6) အမှန်တကယ် porn စွဲ: compulsive (.195) နှင့် Access ကိုကြိုးပမ်းမှုများ (.07)။ ရိုးရှင်းသော: အအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေမေးခွန်းများကို (7-9) အားကောင်းဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအဘို့အအထက်သို့စုစုပေါင်း CPUI ရမှတ် skew ။ အဆိုပါ3အရှက်ကွဲခြင်းမေးခွန်းများကိုကွာ ယူ. စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် CPUI အကြားဆက်စပ်မှုမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် တစ်ဦးမျှသာ 0.13 ။
အမှန်တကယ်စွဲ CPUI မေးခွန်းများကိုဆန်းစစ်ကြည့်လျှင်“ Access Efforts” မေးခွန်း (၄) မှ (၃) သည်အဓိကစွဲလမ်းမှုစံနှုန်းများကိုအကဲဖြတ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ မည်သည့် စွဲ - "ပြင်းထန်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြားမှရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း။ " အတင်းအဓမ္မအသုံးပြုခြင်းသည်စွဲလမ်းမှု၏အမာခံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆနျ့ကငျြဘ၌, compulsive အပိုင်းအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကို #1 အပေါ်မှီခို ယထာဘူတမကျသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (“ ငါလုပ်တယ် ခံစား စွဲ? ") ။
ယုံကြည်မှုနှင့်ခံစားချက်များကိုမဟုတ်ဘဲတိကျသောအပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်သည့် Access Efforts မေးခွန်း ၄-၆ ကိုပြန်ကြည့်ပါ။ အဓိကထွက်ပေါက်: Religiosity နှင့် Access Efforts သုံးခုအကြားအလွန်အားနည်းနေသောဆက်စပ်မှုရှိသည် (သာ 0.07) ။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အတူအနည်းငယ်သာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းဆေး (တကယ်တော့နီးပါးရှိသေးသည်ဟုဆိုရန်အကြောင်းပြချက်ကောင်းရှိသည် အဘယ်သူမျှမ ကျနော်တို့လာမယ့်အပိုင်းထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးမျိုး။ )
ထို့နောက် CPUI ပုဒ်မခွဲ ၃ ခုနှင့်“ အသုံးပြုသောနာရီများ” အကြားဆက်စပ်မှုကိုဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့။ အောက်ပါဇယားတွင်သုံးခု CPUI ပုဒ်မခွဲ, 2,3နှင့်4ရေတွက်လျက်နှင့် “ [အချိန်ကာလများတွင်] အသုံးပြုခြင်း” အရေအတွက်အား5ဖြစ်ပါတယ်။
"အကြားဆက်စပ်မှု[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါ” နှင့်ရူပဗေဒသဘောတရား (မေးခွန်း ၁-၃)
"အကြားဆက်စပ်မှု[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါ"နှင့် Access အားထုတ်မှု (မေးခွန်းများ 4-6)
လေ့လာမှု 1: 0.39
လေ့လာမှု 2: 0.49
"အကြားဆက်စပ်မှု[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါ” နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်း (မေးခွန်း ၇-၉)
လေ့လာမှု 1: 0.17
လေ့လာမှု 2: 0.04
ဒါဟာဘာသာတရားနဲ့တွေ့ရတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ “[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါ"ဆက်နွယ်နေကြောင်း အလွန်ပြင်းထန်စွာ CPUI မေးခွန်းများကို (1-6) နဲ့တဖနျ, အရှိဆုံးတိကျမှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်သော အမှန်တကယ် porn စွဲ (0.365) ။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ -[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါ"ပင်ပတျသကျ နောက်ထပ် ပြင်းထန်စွာ CPUI ၏အဓိကစွဲမေးခွန်းများ 4-6 နှင့်အတူ (0.44) ။ ဤသည်ကိုဆိုလို အမှန်တကယ် porn စွဲ (အပြုအမူအားဖြင့်အကဲဖြတ်ကဲ့သို့) ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမြင်ချင်းမှစေ့စ့စပ်စပ်ဆက်နွယ်သည်။
သို့သော်ငြားလည်း, "[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါ"အားနည်းနေဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် (0.10) မှ“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများ” (၇-၉) သို့။ ဤမေးခွန်း (၃) ခုသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအားသူတို့မည်သို့မည်ပုံမေးနေသည် ခံစား (ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိစိတ်ဓာတ်, ဒါမှမဟုတ်နေမကောင်း) porn ကြည့်ရှုပြီးနောက်။ အကျဉ်းချုပ်မှာ, အမှန်တကယ် porn စွဲ (1-6) ကြည့်ရှုအားပေး porn ပမာဏကိုမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်, သေးအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေ (7-9) မရှိကြပေ။ ဒီအခြားသောလမ်းထားစေရန်, porn စွဲရှုမြင်ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုလုံးအများကြီးရှိပါတယ်, အရှက်ကွဲခြင်း (ဘာသာရေးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်) နှင့်အတူလုပ်ဖို့အနည်းငယ်သာ။
စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များသည်“ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်”[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါreligiosity နှင့်အတူထက် "။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်မီဒီယာမှ Joshua Grubbs ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်သည်။
“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်း ၃ ခုကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်“ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးပိုမိုခိုင်မာစေသည်။[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါ"နှင့် အမှန်တကယ် porn စွဲမေးခွန်းများကို 1-6 အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်။
“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်း (၃) ကိုဖယ်ရှားခြင်း (အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိသည်ဟုအကဲဖြတ်ခြင်း) သည်ဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးအကြားဆက်ဆံရေးအားနည်းသွားစေသည် အမှန်တကယ် porn စွဲမေးခွန်းများကို 1-6 အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်။
“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” နှင့်အကြားအလွန်ခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုရှိသည် core ကိုစွဲအပြုအမူတွေ Access Accesssort မေးခွန်းများ ၄-၆ မှအကဲဖြတ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုဟာကြည့်ရှုသူအရေအတွက်နှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေပါတယ်။
“ religiosity” နှင့်အဓိကစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ (Access Efforts မေးခွန်း ၄-၆) အကြားဆက်နွယ်မှုသည်လုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သည် (0.07). ရိုးရှင်းစွာထားပါ: စွဲ-related အပြုအမူတွေ, အစားစျယာနျဘာသာတရားကိုထက်, porn စွဲကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ယာနျဘာသာတရားကို porn စွဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘေးမှာရှိပါတယ်။
Grubbs ၏လေ့လာမှုတွင် ပို၍ တိကျသောနိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ဤတွင်ကြည့်ပါ။
အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးချခြင်းနှင့်လုံး ၀ ဆက်နွယ်မှုရှိပြီးဘာသာရေးနှင့်အလွန်အားနည်းနေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်း၏နာရီများသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုထက်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုဖြစ်သည်။ ဘာသာတရား၏ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆက်စပ်မှုရှိသနည်း။ ဒါဟာ skewed နမူနာ၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူမဟုတ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်ဘာသာရေးလူ ဦး ရေ၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမှန်မှန်ကြည့်ရှုကြသည်။ ဤဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ပုံသဏ္skာန်ပျက်ပြားနေသောနမူနာတွင်ယခင်အခြေအနေများ (OCD, ADHD, စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ) စသည်တို့နှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောမိသားစု / မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုများပါဝင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဦး မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု (non-Grubbs အဖွဲ့ဖြင့်ဖြစ်စေ) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် CPUI-9 အလုပ်သမားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု / လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအသုံးပြု porn ပမာဏကိုမေးခွန်းများကို 1-6 (ရန်စေ့စ့စပ်စပ်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ0.50), မဖြစ်သေးမှာအားလုံးဆက်စပ်မေးခွန်းများကို 7-9 (ရန်0.03) ။ ဤသည်ကိုအသုံးပြု porn ၏ပမာဏတစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်အားကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့မခံခဲ့ရပါ။
လေ့လာရေး porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ငွေပမာဏကိုအသိအမှတ်မပြု မဖြစ် porn စွဲဖို့ linearly ဆက်စပ်
အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းအသုံးပြုသောအရေခွံပမာဏသည်ဘာသာရေးဘာသာတရားထက်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုနှင့်များစွာဆက်စပ်နေသည်။ ဒါ့အပြင် Grubbs ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုနက်နက်နဲနဲဖော်ပြခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်“ တကယ့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစစ်မှန်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာလျှင်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုများသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရောဂါလက္ခဏာများမှမဟုတ်ဘဲ“ လက်ရှိအင်တာနက်ကြည့်ရှုခြင်းနာရီ” မှသာပြသသည်။
ခင်ဗျားတို့ထရပ်ကားတစ်စီးမောင်းလို့ရအောင်ဒီစာရေးသူရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (သုတေသန)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် Sub-အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုမှုနာရီနှင့်အတူ linearly မပတျသကျဘူးအင်တာနက်စွဲလမ်း။ အမှန်မှာ၊ 'နာရီအသုံးပြုမှု' ပြောင်းလဲမှုသည်စိတ်မချရသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထူထောင်စွဲစွဲလမ်းမှုအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည်အခြားစိတ်ချရသောအချက်များ (ဥပမာ - CPUI ၏ပထမအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော) ကို အသုံးပြု၍ စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ Grubbs ချန်လှပ်ထားခဲ့သည့်အောက်ပါဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်နာရီနှင့်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
“ သင်သည်လက်ရှိမည်မျှစားကြသည် (အစာစားသည်)?” ဟုမေးရုံဖြင့်စွဲလမ်းမှုရှိနေခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါစို့။ သို့မဟုတ်“ လောင်းကစားကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးတာလဲ။ သို့တည်းမဟုတ်“ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကိုသင်ဘယ်နှစ်နာရီသောက်ပါသလဲ။ ” “ နာရီအသုံးပြုခြင်း” သည်စွဲလမ်းမှုကိုညွှန်ပြသည့်အနေနှင့်မည်မျှပြproblemနာရှိကြောင်းသက်သေပြရန်အရက်ကိုဥပမာအဖြစ်စဉ်းစားပါ။
ဘယ်သောက်သူမှာပြproblemနာရှိပါသလဲ လောင်းကစားစွဲမှုတွင်“ နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်း” သည်မည်မျှအထောက်အကူပြုသနည်း။ ဒီလောင်းကစားသမားနှစ် ဦး ကိုယူပါ။
Las Vegas တွင်နေထိုင်သောအငြိမ်းစားမူလတန်းကျောင်းဆရာ။ သူနှင့်သူ့သူငယ်ချင်းသုံး ဦး တို့သည်ဆေးလိပ်မသောက်သောကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်နီကယ်ကဒ်စက်များနှင့်ဗီဒီယိုဖဲချပ်များကိုတနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းတွင်ပုံမှန်သုံးလေ့ရှိသည်။ ထို့နောက်သူတို့သည်များသောအားဖြင့် CircusCircus $ 9.99 buffet တွင်ညစာစားကြသည်။ စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုသည်ဒေါ်လာ ၅.၀၀ အထိမြင့်မားနိုင်သော်လည်းမကြာခဏပင်ချိုးဖောက်တတ်သည်။ တစ်ပတ်လျှင်စုစုပေါင်းအချိန် - ၂၅ နာရီ။
အသက် (၄၃) နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးငယ်များနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ပုဏ္ဏားလောင်းလောင်းခြင်းကကွာရှင်းခြင်း၊ အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ ဒေဝါလီခံရခြင်း၊ ကလေးသူငယ်ပံ့ပိုးမှုမပေးနိုင်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်မှုအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခြင်းသို့ ဦး တည်စေသည်။ သူသည်တစ်ပတ်လျှင် ၃ ကြိမ်၊ တစ်နာရီလျှင် ၂ နာရီခန့်သာသူသွားသောလမ်းတွင်သူ၏ကစားခြင်းသည်သူ၏ဘဝကိုပျက်စီးစေသည်။ သူကမရပ်နိုင်ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ တစ်ပတ်လျှင်လောင်းကစားအချိန် - ၆ နာရီ။
ဒါပေမယ့်သင်စဉ်းစားမိ, အကယ်စင်စစ်ကိုသုံးမူးယစ်ဆေးဝါးပမာဏစွဲ၏အဆင့်တူညီရပါမည်နည်း မဟုတ်သေချာပေါက်။ ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံသားသန်းပေါင်းများစွာပုံမှန်ဆေးညွှန်း opioids (Vicodin, Oxycontin) ၏အသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်တစ်ရှူးသူတို့အပေါ်မှာကိုယ်ထိလက်ရောက်မှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီ, နှင့်အသုံးပြုခြင်း၏ချက်ချင်းချုပ်ရာပြင်းထန်ထုတ်ယူရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အလွန်နည်းပါးနာတာရှည်နာကျင်မှုလူနာစွဲနေကြသည်။ စွဲကျွမ်းကျင်သူများကစွဲအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုမျိုးစုံကောင်းစွာ-indentified ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုပါဝငျသညျ။ အဆိုပါခွဲခြားရှင်းလင်းသည်ဆိုပါက (, ငါသည်ဤအကြံပြု NIDA အားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ရှင်းပြချက်။ ) နာတာရှည်နာကျင်မှုလူနာအများစုသည်ပျော်ရွှင်စွာနာကျင်မှု debilitating အခမဲ့ဘဝလဲလှယ်အတွက်သူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးပစ်လိမ့်မယ်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းကိုဆက်လက်အရာရာအန္တာရာယ်သူကိုစစ်မှန်တဲ့ opioid စွဲကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။
မည်သူမည်ဝါသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို“ လက်ရှိအသုံးပြုသောနာရီ” နှင့်“ အသုံးပြုသောပမာဏ” တစ်ခုတည်းကသာကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ “ ဆိုးဆိုးရွားရွားဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်းဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း” သည်ကျွမ်းကျင်သူများအားစွဲလမ်းမှုကိုကူညီရန်နှင့်“ လက်ရှိအသုံးပြုနေသောနာရီများ” ကိုဘာကြောင့်အသုံးမပြုရသည့်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ “ Access Efforts” CPUI ၏မေးခွန်း ၃ ခုက“ ဆိုးဆိုးရွားရွားဆိုးကျိုးများကြားမှရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို” အကဲဖြတ်သည်ကိုသတိရပါ။ ဂရော့ဘ်စ်၏အချက်အလက်များအရဤမေးခွန်းသည်အပြင်းထန်ဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများဖြစ်သည် အမှန်တကယ် porn စွဲ။
အောက်ဆုံးလိုင်း: Grubbs ၏စွပ်စွဲချက်များသည်စစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှုအတွက်တစ်ခုတည်းသောခိုင်လုံသောစံနှုန်းဖြစ်သည့်“ လက်ရှိအသုံးပြုသောနာရီများ” ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သူတို့မဟုတ်။ နာရီပေါင်းများစွာစွဲစွဲလမ်းမှုအတွက် proxy ဖြစ်ခဲ့လျှင်ပင် Grubbs ၏လေ့လာမှုများအရ“ လက်ရှိ porn အသုံးပြုမှုနာရီ” သည်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ“ ရိပ်မိ” စွဲ) နှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ“ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” သည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့် (CPUI မေးခွန်း ၁-၆) ဘာသာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Grubbs ၏ကောက်ချက်သည်မှန်ကန်မှုမရှိသောကြောင့်လက်ရှိစွဲလမ်းနေသောသိပ္ပံပညာအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
“ လက်ရှိညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုသည့်နာရီ” သည်ပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများစွာကိုချန်လှပ်ထားသည်
ဒုတိယနည်းစနစ်ဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုမှာ Grubbs သည်အကြောင်းအရာများကို“ လက်ရှိ porn အသုံးပြုမှုနာရီ” နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် porn အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမေးခွန်းသည်မရေမရာဖြစ်နေသည်။ ဘယ်ကာလအတွင်းမှာလဲ။ ဘာသာရပ်တစ်ခုက“ မနေ့ကငါဘယ်လောက်အထိသုံးခဲ့တာလဲ။ ” နောက်ထပ် "ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျော်?" သို့မဟုတ်“ မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများကြောင့်ကြည့်ရှုခြင်းမှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးကတည်းကပျမ်းမျှအားဖြင့်?” ရလဒ်မှာနှိုင်းယှဉ်။ မရသောအချက်အလက်များဖြစ်ပြီးစိတ်ချရသောကောက်ချက်ဆွဲရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ မရနိုင်ပါ။
အပိုင်း 3: အမှန်တကယ် Porn စွဲရန်စျယာနျဘာသာတရားကို Related ပါသလား
နိဒါန်း: လိင်ကုသထံမှသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများအဘယ်သူသည် client များရှိပါသည်အကြံပြု ခံစား ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းသော်လည်း၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအချို့သည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သတ်၍ အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းရသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” မှသာခံစားနေရပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းနေသလား။ ဖြစ်ကောင်း။ ဒါကဆိုပါတယ်, ဒီတစ် ဦး ချင်းစီရပ်တန့်ချင်ပေမယ့်သူတို့က porn ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်။ ဤ“ ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ” သည်အမှန်တကယ်စွဲစွဲလမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ အပြစ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အရှက်တကွဲခံစားရသည်ဖြစ်စေမသေချာသည်မှာ Grubbs CPUI မပေးနိုင် ဤသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သူ့ကိုမဆို“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” နှင့်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။
CPUI မေးခွန်းများကိုတစ်ခုမှာတတိယဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအဘို့အမြင့်မားရမှတ်များအတွက်ရရှိလာတဲ့, နောင်တ, အရှက်ကွဲအကဲဖြတ်ရန်
CPUI မေးခွန်း (၉) ခု၏နောက်ဆုံး ၃ ခုသည်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်း၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းနှင့်နောင်တရခြင်းတို့ကိုအကဲဖြတ်သောကြောင့်ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ CPUI ရမှတ်များသည်အထက်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီနှင့်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောခရစ်ယာန်တစ် ဦး သည် CPUI မေးခွန်းများ ၁-၆ တွင်တူညီသောရမှတ်များရှိပါကမေးခွန်း ၇-၉ ကိုထည့်ပြီးသည့်နောက်တွင်ခရစ်ယာန်သည် CPUI-3 ရမှတ်များနှင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုနီးစပ်သည်။
Grubbs ၏အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များမှာ ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (မေးခွန်းများကို 7-9) အကြောင်းပိုမိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိပေမယ့်သူတို့ကမဆိုပိုပြီးစွဲ (မေးခွန်းများကို 4-6) မဟုတ်စေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Grubbs ၏လေ့လာမှုများမှအချို့သောဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်နောင်တရ။ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းရသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အဲဒီမှာအံ့သြစရာမရှိပါ။ ဘာသာရေးလူ ဦး ရေ၏ရာခိုင်နှုန်းနိမ့်ကျမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောကြောင့် Grubb ၏တွေ့ရှိချက်များအရဘာသာရေးလူအများစုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမဖော်ပြထားပါ။ သော့ချက်အချက်: Grubbs သည်ညစ်ညမ်းသောဘာသာရေးဘာသာရပ်များဥပမာ - လူနည်းစုကိုအသုံးပြုသော porn သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုရန်ဖြစ်သည်။
အခြားစွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားများအတွက်အကဲဖြတ်မေးခွန်းများတွင်အပြစ်ရှိသည်နှင့်ရှက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမရှိသလောက်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ သေချာပါတယ်အဘယ်သူမျှ ဒုစရိုက်ဖြေ, အရှက်ကွဲအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့မေးခွန်း၏သုံးပုံတစ်ပုံပါစေ။ အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder ထံမှဥပမာ, DSM-5 စံ 11 မေးခွန်းများကိုဆံ့။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမမေးခွန်းများအဘယ်သူမျှမသောက်မူးရူးပြီးနောက်နောင်တသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိကြောင်းအကဲဖြတ်ရန်။ DSM-5 လောင်းကစားစွဲလမ်းမှုတွင်မေးခွန်းထုတ်ခြင်းသည်နောင်တ၊ ယင်းအစားဤ DSM-5 စွဲမေးခွန်းပုံစံနှစ်ခုလုံးသည်အလုပ်မဖြစ်ခြင်းကိုအလေးပေးသည် အပြုအမူတွေ, မေးခွန်းများကို CPUI-4 ၏ 6-9 ဆင်တူ:
သတိရပါ၊ CPUI မေးခွန်း ၄-၆ သည်အခြား“ အချက်များ” ထက်“ လက်ရှိအသုံးပြုသောနာရီများ” နှင့် ပို၍ ဆက်စပ်နေသည် (0.44)။ ဆိုလိုသည်မှာ“ နာရီအသုံးပြုမှု” သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည် အမှန်တကယ် Grubbs ရဲ့ဒေတာမှာ porn စွဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူမေးခွန်း ၄-၆ သည်“ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်း” နှင့်အနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ (0.07)။ ဆိုလိုတာကဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုဟာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူး။ ဘာသာရေးနှင့်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအကြားအလွန်သေးငယ်သောဆက်နွယ်မှုကို Grubb ၏လွဲမှားသောနမူနာနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားအချက်များကပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှင်းပြနိုင်သည်။
ယာနျဘာသာတရားကို porn စွဲကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူး။ တစ်ဦး Wee နည်းနည်းပင်မဟုတ်။
ပုဒ်မ ၂ တွင်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနာရီ” သည်ဘာသာရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စုစုပေါင်း CPUI-2 ရမှတ်များနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်ကြောင်းထောက်ပြခဲ့သည် သို့မဟုတ်သုတေသီတစ် ဦး ပြောသကဲ့သို့ “ နာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းစွာအသုံးပြုခြင်း” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဘာသာရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ပိုကောင်းမည်ဟုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းအကြားဆက်စပ်မှုကြောင်းထောက်ပြသည် အမှန်တကယ် porn စွဲ (CPUI မေးခွန်းများကို 4-6) နှင့်ယာနျဘာသာတရားကို0ပျမ်းမျှ.07အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (CPUI မေးခွန်း ၄-၆) နှင့်“ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” ဖြစ်သည် 0.44 ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်: “ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဘာသာရေးဘာသာတရားထက် ၆၀၀ + ရာခိုင်နှုန်းထက် ပို၍ ပြင်းထန်စွာခန့်မှန်းခဲ့သည်။
သူကပြောပါတယ်, Grubbs နေဆဲ (စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် core ကိုစွဲမေးခွန်းများကို 4-6 အကြားအားနည်းအပြုသဘောဆက်ဆံရေးဟာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်0.07) ။ ဒီတော့ Grubbs ဖြစ်ပါတယ်စျယာနျဘာသာတရားကို porn စွဲခန့်မှန်းကြောင်း, ညာဖြစ်သနည်း အဘယ်သူမျှမ, ယာနျဘာသာတရားကို porn စွဲကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူး။ အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်။ ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း porn စွဲဖြစ်လာဖို့ porn နှင့်အရှင်လျော့နည်းဖွယ်ရှိသုံးစွဲဖို့ဝေးလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
Grubbs ၏လေ့လာမှုများ ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၏ cross-အပိုင်းကိုမသုံးခဲ့ပါ။ အဲဒီအစား, (ဘာသာရေးသို့မဟုတ် nonreligious) လက်ရှိ porn အသုံးပြုသူများကိုသာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုများ၏သဘောအရဆိုလျှင် Non-ဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီ (နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဝေးအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများသတင်းပို့လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4, လေ့လာမှု 5, လေ့လာမှု 6, လေ့လာမှု 7, လေ့လာမှု 8, လေ့လာမှု 9, လေ့လာမှု 10, လေ့လာမှု 11, လေ့လာမှု 12, လေ့လာမှု 13, လေ့လာမှု 14, လေ့လာမှု 15, လေ့လာမှု 16, လေ့လာမှု 17, လေ့လာမှု 18, လေ့လာမှု 19, လေ့လာမှု 20, လေ့လာမှု 21, လေ့လာမှု 22, လေ့လာမှု 24)
ထို့ကြောင့် Grubbs ၏ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူနမူနာသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသောဘာသာရေးယောက်ျားလေးများ၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်နှင့်ကွာခြားသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင် ယာနျဘာသာတရားကို porn စွဲဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်ပါသည်.
ကောလိပ်ကျောင်းအသက်ဘာသာရေးယောက်ျားအပေါ်နောက်ထပ်လေ့လာမှု (မှားတယ်လို့ယုံကြည်ပေမယ့်အဲဒါကိုငါလုပ်နေတုန်းပဲ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမသုံးတဲ့ဘာသာရေးလူငယ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ၂၀၁၀) ထိုထင်ရှား:
ဆနျ့ကငျြ, ကောလိပ်အရွယ်ယောက်ျား၏ Cross-Section လေ့လာမှုများ (porn ၏အတော်လေးမြင့်မားတဲ့နှုန်းထားကြည့်ရှုသတင်းပို့ယူအက်စ် - ၂၀၀၈: 87%, တရုတ် - 2012: 86%, နယ်သာလန် - 2013 ခုနှစ် (အသက် ၁၆ နှစ် - ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း) ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ကောလိပ်အရွယ်အရွယ်ရှိဘာသာရေးအမျိုးသားအများစုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလေ့မရှိသဖြင့်ဂရော့ဘ်စ်၏ "ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများ" ၏ပစ်မှတ်ထားသောနမူနာမှာအတော်အတန်လွဲမှားနေသည်။
ယခုငါတို့ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်အနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်မှလှည့်။
ဘာသာရေး #1) porn အသုံးပြုသူများသည် Pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းရှိသည်ဖို့များပါတယ်
တစ်ဦးတည်းဤသည်အချက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အတိုင်း, Grubbs porn စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းအဘယ်ကြောင့်ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ဒါဟာအယူအဆအပေါ်လေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည် ကုသမှုရှာကြံ (ကျွန်တော်အတူတူချို့တဲ့အချပ်ကနေအချိုးအစားမမျှမမိုဃ်းသီးကျဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်တော်မူသော) porn / လိင်စွဲ။ ကုသမှုရှာဖွေနေသူထုတ်ဖေါ် အဘယ်သူမျှမ စွဲလမ်းနှင့်ယာနျဘာသာတရားကို၏စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်တိုင်းတာများအကြားဆက်ဆံရေးဟာ (2016 လေ့လာမှု 1, 2016 လေ့လာမှု 2) ။ Grubbs ၏ကောက်ချက်မှန်ကန်မှုရှိပါကကုသမှုခံယူလိုသောဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်အချိုးအစားမညီမျှမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီအယူအဆကိုဘာသာရေးနှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဘာသာတရားအပေါ်တိုင်းတာမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြမထားသည့်လိင် / လိင်စွဲလမ်းသူများအားကုသခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှအထောက်အပံ့ပေးသည်။2016 လေ့လာမှု 1, 2016 လေ့လာမှု 2).
#2) porn အသုံးပြုမှုမြင့်မားမှာဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဘာသာရေးအလေ့အကျင့်သို့ပြန်လာနှင့်ဘာသာရေးကိုပိုမိုအရေးပါလာ
ဤ ဘာသာရေး porn သုံးစွဲသူများ 2016 လေ့လာမှု Grubbs ၏အနည်းငယ်ဆက်စပ်မှုကိုသူ့ဟာသူရှင်းပြနိုင်သည့်ထူးဆန်းသည့်တွေ့ရှိချက်ကိုတင်ပြခဲ့သည် အမှန်တကယ် porn စွဲနှင့်ယာနျဘာသာတရားကို။ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအကြားဆက်ဆံရေး curvilinear ဖြစ်ပါတယ်။ porn အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်, ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်များနှင့်ဘာသာတရား၏အရေးပါမှုအဖြစ် လြော့ပေါ့စေ - ပွိုင့်အထိ။ ဘာသာရေးလူတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်စတင်အသုံးပြုသည်နှင့်အမျှဤပုံစံသည်ပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုမကြာခဏစတက်ပြီးသူ၏ဘ ၀ တွင်ဘာသာရေး၏အရေးပါမှုသည်မြင့်တက်လာသည်။ လေ့လာမှုမှကောက်နုတ်ချက်။
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြောင့်ပိုမိုကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ပြproblemနာဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုဖြေရှင်းရန်ဘာသာရေးသို့ပြန်သွားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ချေ။ အဆင့် ၁၂ ဆင့်ကို အခြေခံ၍ စွဲလမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့များတွင် ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ စာတမ်းရေးသားသူကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်အကြံပြုခဲ့သည်။
စွဲပိုဆိုးလာရင်အဖြစ်မိမိတို့အယူဝါဒမှပြန်လာသောဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကဒီဖြစ်စဉ်ကိုအလွယ်တကူအမှန်တကယ် porn စွဲနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအကြားအနည်းငယ်ဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။
# 3) ဘာသာရေးဘာသာရပ်များနှင့်မတူဘဲဘာသာရပ်များကိုသုံးသောလောကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအသိအမှတ်မပြုပေ
#4) ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါဇီဝအကြောင်းရင်းများ
ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်ဦးစလုံး ဆေး နှင့် junk အစားအစာ လေ့လာမှုများပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ဟုထုတ်ဖေါ် စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ (အသုံးပြုသူအပြည့်အဝလွစွဲသို့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဖြစ်စေမ) ။ အဆိုပါမူလတန်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါသည် ာင်း အရာမတရားသောလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲထုတ်လုပ်ကြောင်းအချက်ပြနှင့်အတူဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာဝေဖန်။ ာင်းနှင့်အတူ, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဆားကစ်ကတော့စွဲလမ်းအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သောအမှတ်တရများသို့မဟုတ်တွေကိုမှ Hyper-အထိခိုက်မခံဖြစ်လာရှာကြံ။ ဤသည်၌နက်ရှိုင်းသော pavlovian အေးစက်ရလဒ်များကို လှုပ်ရှားမှုကနေနှစ်သက်သို့မဟုတ်ပျော်မွေ့နေချိန်မှာ "လို" သို့မဟုတ်တပ်မက်တိုးမြှင့်။ ထိုကဲ့သို့သော, ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့ pop-up ကိုမြင်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တွေကို, porn များအတွက်ပြင်းထန်သောမတရားသောဖြစ်ပေါ်။ porn အသုံးပြုသူများကိုထိခိုက်သို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုသတင်းပို့ (လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.)
ပို. ပင်ထူးခြားပြောင်မြောက် abstinence ၏ကာလ (2-4 ရက်သတ္တပတ်) ဖြစ်ပါသည် neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားလပ်ချိန်ယူပါဘူးတဲ့အသုံးပြုသူအတွက်ပေါ်ပေါက်ကြပါဘူး။ ဦးနှောက်တွင်ဤပွောငျးလဲအစပျိုးခြင်းတုန့်ပြန်သုံးစွဲဖို့မတရားသောတိုးမြှင့်။ ထို့ပြင် စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကအပြောင်းအလဲများ ပင်အသေးစားစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုထိုကဲ့သို့သော သုံးစွဲဖို့မတရားသော.
အခုတော့ရဲ့ဘာသာရေးနှင့် nonreligious porn အသုံးပြုသူတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပြန်လာပါစေ။ ဘယ်အုပ်စုတစ်စုကပိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူများကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသနည်း ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းသုတေသနပေးထား ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများက porn ကို အသုံးပြု. ခံရဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့, ဖြစ်ကောင်းတစ်မူးရူး-abstinence သံသရာထဲမှာဝဲလောကအသုံးပြုသူများသည်ထက် ပို. ဘာသာရေးရှိပါတယ်။ "။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူများသည်" ဘာသာရေးအသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်လေ့မယ်လို့လောကအသုံးပြုသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကခဲရက်အနည်းငယ်ထက်ပို၏အားလပ်ချိန်ယူကြောင်းသတင်းပို့ - သူတို့ porn အသုံးပြုမှုကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသည်အသုံးပြုသူများဖြစ်လာမဟုတ်လျှင်။
ယင်းမူးရူး-abstinence သံသရာ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း porn အသုံးပြုသူများကိုတိုးချဲ့ကွာဟချက် (နှင့်မကြာခဏတိုးတက်မှု) ကိုတွေ့ကြုံခံစားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကြာခဏအသုံးပြုသူများကနဲ့မတူဘဲအတွက်, သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုကသူတို့ကိုထိခိုက်လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်တစ်ဦးတည်းနေတဲ့ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များဆီသို့ဦးတည်ပေလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်, ပိုမိုအရေးကြီးသောရလဒ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း porn အသုံးပြုသူများသည်ခိုင်ခံ့သောမတရားသောပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်စဉ်များတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဂူလုပ်ပေးသည့်အခါတတိယ, သိပ္ပံသူတို့မကြာခဏထိန်းချုပ်မှုထဲကပိုပြီးခံစားရလျက်, မူးရူးပြီးတာကတော့စိတ်ဓာတ်ပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူတို့လောကတို့၌ရှိသောညီအစ်ကိုတို့သည်ထက်လျော့နည်းအကြိမ်ရေနှင့်အတူအသုံးပြုနေသည်သော်လည်း, တိုတောင်းမှာတော့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူများကိုအတော်လေးစွဲနိုင်ပါတယ်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲစမ်းသပ်မှုအပေါ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားသောဂိုးသွင်း။
အများစုကဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအန္တရာယ်များကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်ပါပြီ။ သူတို့ဟာထို့ကြောင့်လျော့နည်း porn ကိုအသုံးပြုကြရန်နှင့် up ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ကြဖို့ပိုများပါတယ်။ ၏ Grubss CPUI-9 အားဖြင့်အကဲဖြတ်သကဲ့သို့လုပ်နေတာသူတို့ porn စွဲ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ပိုများပါတယ် et al Leonhardt ။ မေးခွန်း ၅ ခုပါ ၀ င်သည်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း porn အသုံးပြုသူများကသူတို့လောကတို့၌ရှိသောညီအစ်ကိုတို့သည်ထက်လျော့နည်းအကြိမ်ရေနှင့်အတူအသုံးပြုနေသည်သော်လည်းအတော်လေးစွဲဖြစ်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲစမ်းသပ်မှုအပေါ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားသောဂိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း 4: Grubbs စွဲသုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်လှဲ
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲခြင်း၏တရားဝင်မှုကို Joshua Grubbs ၏အနည်းဆုံးလေ့လာမှုသုံးခုတွင်ဖော်ပြထားသည်။Grubbs et al ။ , 2015; Bradley et al ။ , 2016; Grubbs et al ။ , 2016။ ) စာတမ်းသုံးခုစလုံးသည်စာဖတ်သူများအားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိကြောင်းပြသခြင်းအားဖြင့်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားစွဲလမ်းမှုသုတေသန (နှင့်ဆက်စပ်သောအကဲဖြတ်ကိရိယာများ) ကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်သည်။ စွဲ) "ရိပ်မိ," အစစ်အမှန်မဟုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Grubbs porn စွဲပယ်ချဖို့ကိုးကားအဆိုပါလေ့လာမှုများ
အဖွင့်စာပိုဒ်များတွင် Grubbs ၏ယခင်စာပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုသုံးခုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲခြင်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ပြောဆိုချက်ကိုအခြေပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏နက်ရှိုင်းစွာဘက်လိုက်မှုကိုပြသသည်။ စာရေးသူ David Ley၊ လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား, နှင့်သူ၏အလုပ်ဟောင်းက UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause, တရားဝင်များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာပေဝေဖန်ထားသည် အားနည်းနည်းစနစ် နှင့် မထောက်ပံ့ကောက်ချက်။ Grubbs porn စွဲ debunk ယုံကြည်နေသုံးခုစာတမ်းများ:
Leကရာဇ်မင်း၌အဝတ်အစားမရှိ - ဒေးဗစ်လလေ၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်ပီတာဖင်န်တို့၏ 'အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုပုံစံ' (၂၀၁၄) ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, မ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related သည် Vaughn R. သံမဏိ, ကင်မရွန် Staley တိမောသေ Fong သည်, နီကိုးလ် Prause
သာ။ ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု, Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်လိင်လှုံ့ဆော်မှုကိုကြည့်ရှု (2015), နီကိုးလ် Prause & ဂျင်မ် Pfaus
စက္ကူ #1 (Ley et al ။ , 2013) is တစ်ဦးတည်းတဖက်သတ်ဝါဒဖြန့်အပိုင်းအစ Ley, Prause နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်ဖြစ်အခိုင်အမာထားတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပတေရုသဖင်လန်က။ ဒါဟာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပထမဦးစွာ Ley et al။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်လေ့လာမှုအားလုံးသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြချက်များသည်ချန်လှပ်မှု“ သာ” ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ချန်လှပ်ထားသည်။ သင်မှန်ပါသည်ဖတ်ပါ ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းသည်လေ့လာမှုများအတွင်းမှချယ်ရီကောက်ယူထားသောကျပန်းနှင့်လမ်းလွဲစေသောမျဉ်းကြောင်းများကိုသုတေသီများ၏အမှန်တကယ်ဆန့်ကျင်သောကောက်ချက်အားတင်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ တတိယအချက် Ley et al။ ဖန်ဆင်းတောင်းဆိုမှုများမှလုံးဝဆီလျှော်ခဲ့မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများထောက်ပြသည်။ ကျနော်တို့ကဤအလွန်အားကောင်းတဲ့အခိုင်အမာများမှာနားလည်သဘောပေါက်သော်လည်း, သူတို့အပြည့်အဝဤသည်၌ထောက်ခံနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည် လိုင်း-by-line ကိုဝေဖန်မှု။ ထိုသို့မှတ်ချက်ပြုရပါမည် Ley et al ။ အယ်ဒီတာ, ချားလ်စ်တခု, ရှည်လျားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် အသံဝေဖန် porn နှင့်လိင်စွဲလမ်း၏။ ဒါ့အပြင်သင်သိရ လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ ရှိပါတယ် တိုတောင်းတဲ့ခြင်းနှင့်ကျောက်တောင် သမိုင်း။ ဒါဟာ 2004 အတွက်ထုတ်ဝြေခင်းစတင်ခဲ့, ပြီးတော့သာ 2008 အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေမည်အကြောင်း, 2014 အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးသွားရုံအချိန်အတွက်အင်္ဂါရပ်မှ Ley et al.
စက္ကူ #2 (သံမဏိ et al ။, 2013) မွှမ်းတင်ကာ EEG လေ့လာမှုခဲ့သည် မီဒီယာ သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် ဆန့်ကျင် porn စွဲ၏တည်ရှိမှု။ မရဒါ။ ဤသည် SPAN Lab မှလေ့လာမှုအမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါအဆိုပါလေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ် (P300) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ လေ့လာရေးစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။ သို့သော်ကြောင့်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုမှတွေ့ရှိချက်များကို uninterpretable နေသောခေါင်းစဉ်: 1) ဘာသာရပ်များသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ) ကြ၏ 2) ဘာသာရပ်များစိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲများအတွက်ပြမဟုတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, 3) လေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့; 4) မေးခွန်း porn စွဲဘို့အတည်ပြုမခံခဲ့ရပါ။ ယင်းနှင့်အတူအညီ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများ, ဒီ EEG လေ့လာမှုလည်းအတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ နည်းသော ပူးပေါင်းလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။ အခြားသောလမ်း ထား. , porn ပိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်မတရားသောနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate မှပိုမိုနှစ်သက်သည်။ လေ့လာမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနီကိုးလ် Prause သည်ဤ porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာမြင့်သောလိင်စိတ်ခဲ့သေးလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို (ပူးပေါင်းလိင်အဘို့မိမိတို့အလိုဆန္ဒဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့ပါတယ်) အတိအကျကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုပြောဆိုထားသည်။ အဖြစ် မရလဒ်ဖွဲ့အစီအမံခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ကိုက်ညီ, Grubbs သည်မူရင်းစာရေးသူများ (“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏ပြိုကွဲခြင်း”) ၏မှားယွင်းသောကောက်ချက်ကိုအစဉ်အမြဲတည်မြဲစေခဲ့သည်။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း ၆ ခုသည်တရားဝင်ဆန်းစစ်ထားသည် သံမဏိ et al ။, 2013 က၎င်း၏တွေ့ရှိချက်က debunk မှမလုပ်ပဲအဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြောင်းနိဂုံးချုပ်: 1, 2, 3, 4, 5, 6။ ဒါ့အပြင်ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှု။
စက္ကူ #3 (ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015) porn ၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထားအဖြစ် Grubbs ခြင်းဖြင့်တင်ဆက်ခဲ့သည်:
... အချို့လေ့လာမှုများကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာကောင်းသည့်ရလဒ်များ (Prause & Pfaus, 2015) ကိုပင်အကြံပြုသည်။
Prause နှင့် Pfaus တို့သည်အမှန်တကယ်လေ့လာခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော“ အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များ” မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ Prause & Pfaus (2015) စက္ကူမှရရှိသောအချက်အလက်များသည်၎င်းကိုအခြေခံထားသည့်အစောပိုင်းလေ့လာမှုလေးခုနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ မတူကွဲပြားမှုများမှာသေးငယ်။ မရှင်းပြရသေးပါ။ သုတေသီရစ်ချတ်အေ Isenberg က MD ကမှတ်ချက်အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပွင့်လင်း Access ကို, မတူကွဲပြားမှုများ၊ အမှားအယွင်းများနှင့်ထောက်ခံမှုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများမှအများအပြား (သို့သော်အားလုံးမဟုတ်) ကိုထောက်ပြသည်။ Prause & Pfaus ၏တစ် ဦး တည်းသောအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်မှာအိမ်တွင်း porn ကိုပိုမိုကြည့်ရှုသောဘာသာရပ်များမှ porn ကိုကြည့်ပြီးနောက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသော "subjective arousal rating" ဖြစ်သည်။ ဒီပြောဆိုချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးပြproblemsနာအတော်များများ -
ဒီ arousal ခြားနားချက်အနက်ကိုဘော်ပြမှပိုပြီးသိပ္ပံ-based လမ်းကိုပိုပြီး porn ကိုသုံးသူယောက်ျား သာ. ကြီးမြတ်ကြုံတွေ့ကြောင်း porn သုံးစွဲဖို့မတရားသော။ စိတ်ဝင်စားစရာသူတို့တစ်တွေမိတ်ဖက်များနှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နည်းပါးလာနာရီ logged သောသူထက် masturbate ဖို့ပိုအလိုဆန္ဒနှင့်အတူလိင်များအတွက်လျော့နည်းဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။
Prause & Pfaus သည်ဘာသာရပ်များ၏နှိုးဆွမှုကိုတိကျစွာအကဲဖြတ်။ မရပါ။
အခြေခံ4လေ့လာမှုများ porn အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများတစ်3မိနစ်ရုပ်ရှင်, တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ခု 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အခြေခံ4လေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသောအရေအတွက်ကအကြေးခွံအလုပ်။ တဦးတည်းတဦးတည်း0စကေးတစ်ခု7အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုလိင်စိတ်နိုးထ ratings သတင်းပို့ကြဘူး, 1 စကေးတစ်ခု7ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD Prause & Pfaus အားအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးမှုမရှိခြင်းကြောင့်မည်သို့တောင်းဆိုနိုင်ကြောင်းရှင်းပြရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ စာရေးသူတစ်ယောက်အနေဖြင့်နားလည်လွယ်သောအဖြေကိုပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အဘယ်အရာ Grubbs လေ့လာမှုများချန်လှပ်
ဂရော့ဘ်စ်၏ဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှု ၃ ခုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံကြောင်းသက်သေပြသည့်အာရုံကြောနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှုအားလုံးကိုချန်လှပ်ထားသည်။40 ကျော် ဒီနေရာမှာစုဆောင်း) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Grubbs ချန်လှပ် 17 မကြာသေးမီကစာပေ & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်လိင်စွဲစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာစာပေများ (တူညီသောစာရင်းတွင်) ။ ဤလေ့လာမှုများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်ယေးလ်တက္ကသိုလ်မှထိပ်တန်းအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များ၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၊ ဒွိုက်စဘတ်အက်စ်ဆင်နှင့်မက်စ်ပလပ်ခ်တက္ကသိုလ်တို့မှဖြစ်သည်။ (Grubbs ၏လေ့လာမှုများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစဉ်ကဤအရာအချို့ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသေးသော်လည်းများစွာသောသူတို့သည်လျစ်လျူရှုခံထားရသည်။ )
Ley နှင့် Prause ရှိသူများထင်ပေါ်ကျော်ကြားသုတေသီများ Contrast ။ Ley မှ neuroscience မနောက်ခံရှိပြီးသည်အထိဘာမျှမထုတ်ဝေခဲ့ Ley et al။ , 2014. Prause သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ မှစတင်၍ မည်သည့်တက္ကသိုလ်နှင့်သူမနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ တောင်းဆိုချက်များ ပတျဝနျးကငျြသူမ၏2EEG လေ့လာမှုများထပ်တလဲလဲပါ (peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေအတွက် 2015 လေ့လာမှုရှုံ့ခဲ့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7။ , 2013 လေ့လာမှု: 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
ကျနော်တို့၏တည်ရှိမှုအသိအမှတျပွုကွောငျးကိုမှနျးနိုငျသညျ အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၄၀ နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံသည့်စာပေနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ၁၈ ခု Grubbs ၏စာတမ်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပြင်းထန်စွာဖြတ်တောက်ပစ်လိမ့်မည်။
“ လိင်အပေါ်ဘာသာရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသဘောထားတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်သူက“ ဒါဟာရှက်စရာပဲ” ဟုပြောသည်။
အကယ်၍“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်အရှက်ကွဲခြင်းသာဖြစ်လျှင်” Grubbs သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများတွင် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုအရေအတွက်တိုးများလာခြင်းကိုမည်သို့ရှင်းပြသနည်း။ ဘယ်လိုလုပ် အရှက်ကွဲခြင်း အဆိုပါစေ တူညီတဲ့ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူပေါ်ပေါက်ကြောင်း? ဦး နှောက်တွင်စွဲလမ်းမှုရှိနေကြောင်းသက်သေပြသည့်အရှက်ရခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားကမည်သို့သက်သေပြနိုင်မည်နည်း။ မဖြစ်နိုင်ဘူး
(ဘာသာရေးနှင့်မဟုတ်ရင်နှစ်ဦးစလုံး) တစ်ဦးသည်အချိန် porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုနှိုင်းယှဉ်သလော မြင် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက် ဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာမှုပုံစံဒီဇိုင်းပါ။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင်: ၏ဝေဖန်မှု -“ ပျက်စီးသွားသောကုန်ပစ္စည်းများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သောဘာသာတရားနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြားတွင်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုအမြင်” (Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen 2017)